Ndingayigqithisela ilayisensi kwenye ikhompyuter ndiye kwenye? - DataNumen
Ukuba uthenga ilayisensi enye esemgangathweni, awunakudlulisa ilayisensi ukusuka kwenye ikhompyuter iye kwenye, ngaphandle kokuba ikhompyuter endala ayisayi kuphinda isetyenziswe kwixa elizayo (ishiywe).
Ukuba uthenga ilayisensi yobuchwephesha, emva koko unokuhambisa ilayisensi ukusuka kwenye ikhompyuter ukuya kwenye ngokukhululekileyo. Ndiyacela Qhagamshelana nathi ukuba ufuna ukuthenga ilayisensi enjalo.
ilayisenisi, ilayisensi yobuchwephesha, iphepha mvume
Ukuhlaziywa ngoMeyi 13, 2021
Zingaphi iikhompyutha endinokuyifaka kwimveliso yakho?Ungayenza njani ilayisensi?